အမျိုးသားတွေသိဖို့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း..အပိုင်း(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အမျိုးသားတွေသိဖို့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း..အပိုင်း(၁)
အမျိုးသားတွေသိဖို့အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း..အပိုင်း(၁)
Posted by အရင့်ရောင် on May 25, 2012 in Copy/Paste | 39 comments
တွေးမိတွေးရာ ရေးသည် ။ ထပ်တွေးမိက ထပ်ရေးဖြစ်ပါဦးမည် ။
၄ ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် နားလည်မှုအများကြီးပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုတယ် ။ ဥပမာ အခု ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြောပြီးခါမှ ဘုရားသွားချင်တာမျိုး – – ဒါဆို သင် နားလည်ပေးဖို့လိုတယ် ။ ဘုရားကို အတူလိုက်သွားပြီး ပြီးမှ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ ပြန်စည်းရုံးပါ ။
၆ ။ အရာရာမှာ ကိုယ်က ဦးဆောင်နေဖို့လိုတယ် ။ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြတ်ကျော်ကြား အောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ အချိန်တန်ရင်ချစ်သူရင်ခွင်မှာ မှီခိုချင်တာ သဘာဝပါပဲ ။ သူနားခိုဖို့ ကိုယ့်ရင်ခွင်ဟာ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်တစ်ပင်လိုဖြစ်ပါစေ ။ ( သစ်တပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနား တော့မဖြစ်စေနဲ့ – – )
အပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ယောင်္ကျားကို တရစ်ပြီး တရစ်ကျပ်တတ်တဲ့မိန်းမမျိုးကြတော့
ဘာလို့ အဲလို ရစ်နေတာလဲပေါ့
မင်းဖြစ်ရင် မင်းခံရမယ်လို့ ဆိုလိုသလားအရင့်ရောင်….ဟီးဟီး
ဒါပဲလေ ကို ကြောင်
ရွာထဲဝင်ဝင်ချင်း ဒီပို့စ်တွေ့တော့ ယောက်ျားကြီးတန်မဲ့
သိပ်ပြီး ဦးနှောက်စားမနေနဲ့ ယောကျာ်းဖြစ်ဖြစ် မိန်းမဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပဲကို
မိန်းမတိုင်းအတူတူပဲဆိုပြီး ကောက်ချက်ချရင်လွဲမှာပဲ ..
ယောက်ျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်တော့်မှာလည်း အမေ ဆိုတဲ့ မိန်းမ ရှိသလို
အမ ၊ ညီမ ၊တူမ စတဲ့ မိန်းမတွေ ရှိတာပဲ
အားပေးတာကို နဲနဲ ခလုတ်ကန်သင်း မဖြစ်စေချင်ပါဘူး
ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ကွန်မန့်က ပြတ်ကျန်ခဲ့မှန်းမသိ
မနေ့က ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ ကွန်မန့်အရှည်ကြီးကို လေးကြောင်းပဲပါသွားတယ်
အပေါ် ၂ကြောင်းက နောက်လိုက်တာပါ
စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးပါနော် ..
အပေါ်နှစ်ကြောင်းက နောက်တယ်ဆိုတာ လက်ခံ နားလည်ပါတယ်
ဒီလူဂျီး..ယောက်ျားဂျီး တန်မဲ့ စွာထှာ
ဘာမှ မကြောက်နဲ့ မောင်လေးဇိ …
မမဂီ တယောက်လုံး ရှိတယ်…
မမဂီ ပြန်ရောက်ပီ …
ကိုအရင့်ရောင်နဲ့ ကိုကိုကြောင့် ရန်က စောင့်ရှောက်ပါရဇေကွယ်…
ရေးလိုက်မှ ဖြင့် …အချစ် အကြောင်းကကိုမထွက်ဘူး…
စက်ဘီးခွလက်ညှိုးညွှန်နေတဲ့ပုံဂျီး ..မျက်စိ ထဲက မထွက်လို့…
သည်လူဂျီး သည်လောက်နုတာ ..လို့ကို မထင်ထားဘူးဗျို့…
ကဗျာ ကတော့ ကျနော် မတတ်တဲ့ ဘာသာရပ်မို့
ကဲ ဆရာလေး အရင့်ရောင်
ဘယ်က ကူးကူး ဗျာ သ၀န်တိုတာ အချစ်ဆိုရင်တော့ ကျုပ် စိတ်ညစ်မိတယ်
ဘယ်နှယ့်ဗျာ ဒီလောက် မည်းမည်း သည်းသည်းကြီးကို လိုက် သ၀န်တိုနေတယ် ။
ကျုပ်အနေနဲ့ အဆစ်ပေးပြီး အိမ်ပြန်ပို့ ချင်တယ် အဲ့ဒါ ဘယ်လိုပြောပြ စည်းရုံးရမလဲ
ကဲ ဆရာကြီး ကိုထက်……
အမလေး ချောင်းကလည်း ဆိုးလိုက်တာ
မည်းမည်းသည်းသည်း ကိုမှ လိုက်ပီး သ၀န်တိုမနေနဲ့ပေါ့
ဘာသိဘာသာ လေးလဲ နေပါကွာလို့ ချော့ ပီးတော့
သီချင်း တောင်ရှိသေးတယ် နော်……
ဟာဟ ….သိပ်လည်း အထင်မကြီးပါနဲ့ ………။
htet way @
ဆရာရေ. အင်မတန်မှကို ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင် ယောကျာ်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မ ရှိနေတယ်ဆိုတာလေး——-
၆ ။ အရာရာမှာ ကိုယ်က ဦးဆောင်နေဖို့လိုတယ် ။ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြတ်ကျော်ကြား အောင်မြင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ပါစေ အချိန်တန်ရင်ချစ်သူရင်ခွင်မှာ မှီခိုချင်တာ သဘာဝပါပဲ ။ သူနားခိုဖို့ ကိုယ့်ရင်ခွင်ဟာ အရိပ်ကောင်းတဲ့ သစ်တစ်ပင်လိုဖြစ်ပါစေ ။ ( သစ်တပင်ကောင်း ငှက်တစ်သောင်းနား တော့မဖြစ်စေနဲ့ – – )
အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ @
တောင်ကြီး ဖ၀ါးအောက်မှာပဲ ဆိုသလိုပဲပေါ့နော်
((((တခါတရံ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပျော့ညံ့တတ်ပေမယ့်အချစ် သို့မဟုတ် နှလုံးသားရေးရာနဲ့ ပတ်သတ် လာရင် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် မာကျောပြတ်သားတတ်ကြတယ် ။ သူတို့ဟာ သိပ်ပြီးတွေဝေခြင်းမရှိ အမှားအမှန်မကြည့်ပဲ နှလုံးသားကေ စခိုင်းတဲ့အတိုင်း ဘ၀ကို ပုံအောပစ်ဖို့ ၀န်မလေးတတ်ကြဘူး ။)))))
အဲ့အချက်သာ မှန်လို့ကတော့ ခုဆိုရင်
စံရတီ (မိုး) မြင့်လေး ကိုရင့်ကို ပုံအောပြီး ပြတ်သားသင့်နေပီထင်တယ်… ဟိ…
အဲ့အချက်လေး သူလေးသာ နားထောင်ရင် ကိုရင့် လူပျိုကြီး ဘ၀တစ်ခြမ်း
ကျွတ်ချိန်တန်ရောက်နေပီ လိုထင်မိတယ်… ကရင့်ရောင်ရေ…
လုပိုချီး ဘ၀ က ကျွတ်ဖို့ လမ်းမမြင်ဘူးထင့်ပါ့နော်……
အမျိုးသမီးတွေ သိဖို့ အမျိုးသားများအကြောင်း
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားများအားလုံး၏ ၅၀ ရာနှုန်းခန့် သည် ၊ ကိုယ့်မိန်းမကို အချစ်မပြယ် ၊ လုံးဝမကင်းကွာ မခွဲခွါနိုင်သည်မှာ မှန်သော်လည်း ၊ မိန်းမ လစ်လျှင် လစ်သလို တစ်ပွဲတစ်လမ်း အကဲစမ်းတတ်ကြသည် ။
ကြည့်ရတာ သူ့အကြောင်းသူ ပြန်ပြောသွားတာနေမှာ။ မဒမ်ပေကို သွားတိုင်အုန်းမှ ။
ပုရယ် တစ်ခါထဲ ရယ်ပါ
ပေနဲ့ပု နဲ့က ဘော်ဘော်တွေဘဲဟာ ဟာဘဲ…
ခင်ဗျား ကွန်းမန့် ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး ဒေါ်ဒေါ်ပေ့ကို သွားပေးလိုက်ဘီ..
ခုဒေါ့ သိပြီ ……
(အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသားများအားလုံး၏ ၅၀ ရာနှုန်းခန့် သည် ၊ ကိုယ့်မိန်းမကို အချစ်မပြယ် ၊ လုံးဝမကင်းကွာ မခွဲခွါနိုင်သည်မှာ မှန်သော်လည်း ၊ မိန်းမ လစ်လျှင် လစ်သလို တစ်ပွဲတစ်လမ်း အကဲစမ်းတတ်ကြသည် ။)
အဲ့စာသားလေးကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံတယ်ဗျို့..ဟီးဟီး..
windtalker@ ကိုယ်တွေ့တွေ ဟြေနေတာပါလားနော်
ကိုပေ သစ္စာ ဖောက် … :grin:
1to 10 အကုန်မှန်ပါတယ်…..ဦးဦးအ၇င့်ေ၇ာင်၇ယ်…….
1 တူ 11 ဖစ်တွားပီပေါ့နော်
အနေဝေးနေတဲ့ချစ်သူ နောက်တစ်ယောက်မထားအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲချင့်
အနေဝေးပေမယ့် အဝေးနေမဟုတ်ဘူး လေ
နောက်တစ်ယောက် ထားတယ် မတားဘူးဆိုတာတော့
ကာယကံရှင် သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်မေးပါ………ငါ သူ့ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားလို့……နော်
သင့်ကိုလည်း ပြန်လည်းတုန့်ပြန် ချစ်လာမည်မှာ ဧကန်မုချပါပဲ
အမှန်တော့ ယောက်ျား လည်း လူ ။ မိန်းမ လည်း လူ ။
( အိပ်ကြရင်လည်း နှစ်ယောက်လုံး ကောင်းတာချင်း အတူတူ )
လူ အချင်းချင်း အတူတူမှာ ၊
ဘာဖြစ်လို့ ယောက်ျား က မိန်းမ ကို အလိုလိုက်ရမယ်လို့
ယူဆနေကြသလည်း ၊ မသိတော့ပါဘူး ။
ယောက်ျား တွေခမျာ ၊ တော်တော် ဝဋ်ကြီးတာပဲ ။
ဦးဆောင် ရှာဖွေ ကျွေးမွေး နေလို့
လက်ခံပေးလို့ ရပါသေးတယ် ။
အဲလိုလည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး ။
မိန်းမ တွေက အားနည်းလို့လား ( Physically Weaker Sex ) ၊
ဒါကိုလည်း ဥပဒေတွေက အကာအကွယ် ပေးထားပြီးသားပဲ ။
မိန်းမ တွေကိုယ်နှိုက်က ပျော့ ညံ့လို့လား ( Mentally Weaker Sex ) ???
မိန်းမ တွေကိုယ်နှိုက်က အလိမ်ခံရတာ ကို ကြိုက်နေလို့လား ???
ယောက်ျား လေးကသာအလိုလိုက်မယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေကလည်း
လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဖြည့်စည်းပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
သင်ကိုယ်တိုင် မိန်းကလေး ၏ နေရာမှာ နေ၍
ဝေ ယံ says:
အားငယ်နေရှာတဲ့ မာမီပုတို့ အတွက်လဲ ရှာတင်ပေးပါဦး..
စပ်စလူး နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ ရွာသူတွေပါဘူေးနာ်